Madaxweynaha Maraykanka ayaa la sheegayaa inuu taageersan yahay qorshaha dib loogu eegayo sharciga hubka dadka la siiyo
Read more about Sharciga hubka oo muran weyn ka dhaliyay dalka Maraykanka
Read more about The Independent Online : – In Somaliland, women are being raped as a result of extreme drought and lack of support
Read more about Sawirro: Waa sidee nolosha dadkii ka badbaaday ebola afar sano ka dib?
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliin sare ee Puntland Abshir Aw Yusuf Ciise ayaa Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Nugaal u magacaabay Cabdisamad sheikh Xaamid, sida ku xusan wareegto magacaabis ah oo soo gaartay warsidaha Puntlandi
Read more about Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Nugaal oo la magacaabay
Haween lagu laayay toogasho ka dhacdey kaniisad ku taal Ruushka
Dad kasoo baxey fiid kaniisad Dagestan oo uu qof hubeysan xabado ku furey
Read more about Haween lagu laayay toogasho ka dhacdey kaniisad ku taal Ruushka
Taliyayaasha Booliiska iyo Nabad Sugidda Soomaaliya oo maanta la magacaabay
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magacaawday taliyayaasha laamaha kala duwan ee ammaanka dalka.
Read more about Taliyayaasha Booliiska iyo Nabad Sugidda Soomaaliya oo maanta la magacaabay
Shir deg-deg ah oo ay golaha wasiiraddu yeesheen ayaa lagu magacaabay Taliyeyaasha Booliska, Nabadsugida iyo Asluubta Soomaaliya, xilalkaas oo ay muddo si kmg ah u hayeen ku xigeenadooda marka laa reebo taliyaha ciidanka Asluubta.
Bashiir Cabdi Maxamed, oo ahaa taliye ku xigeenkii ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa loo liyaha ciidanka booliiska, Taliyaha Nabadsugida ayaa loo magacaabay Xuseen Cusmaan Xuseen, halka Taliyaha Asluubta loo magacaabay Jen. Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe).
Read more about BREAKING NEWS:- Taliyayaasha nabad sugida, Booliiska iyo Asluubta oo la magacaabay,
Dareenka ka dhashey socdaalka ra'iisal wasaaraha Canada ee Hindiya ayaa ahaa mid hooseeya.
Read more about Maxaa ka jira in Justin Trudeau uu quursi kala kulmay madaxda Hindiya?
BBC-da ayaa maanta billowday inay wararka ku tebiso luuqadaha Igbo iyo Yoruba ee dalka Nigeria
Read more about Laamaha Afka Igbo iyo Yoruba oo maanta ku soo biiray BBC-da
Suuqa ugu wayn Soomaaliya oo maalintii labaad xiran
Waxaa maalintii labaad xiran Suuqa wayn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Read more about Suuqa ugu wayn Soomaaliya oo maalintii labaad xiran